Ngaba kunokwenzeka ukufumana i-backlink esemgangathweni kwi-PR eziphezulu?
Xa udala izixhumanisi zesayithi lakho, kufuneka uhlawule ingqalelo kwimithombo oyisebenzisayo kule njongo. Ingcali enkulu ye-webmasters kunye neengcali eziphezulu ze-SEO zithi i-backlink ezinamandla kakhulu ezidlulisa i-juice ye-link ebonakalayo zivela kumaziko aphezulu e-PR, njenge-Google, i-YouTube, i-Wikipedia okanye i-Facebook.
Siza kuqalisa eli nqaku ngoluvo lokuba usenayo i-akhawunti yezoshishino kwi-Facebook kunye newebhusayithi okanye ubuncinane bekhasi lokungena kwenkampani yakho.
Ngoko ke, njengokuba kukho ukubonisa, yonke into oyifunayo ukuvelisa i-traffic eninzi kwi-site yakho ukudala umxholo ochanekileyo usebenzisa imigaqo yokukhangela efanelekileyo kunye nokwakha i-backlinks kwi-website ephakamileyo ye-PR.
Iindawo eziphakamileyo ze-PR zokufumana i-backlinks esemgangathweni
Kuwumsebenzi onzima ukufumana i-backlinks esemgangathweni kwizikhundla eziphezulu zamagunya ngokukodwa ukuba usandul. Nangona kunjalo, akufanele ushiye njengoko kukho ubuninzi beendlela zokwakha izalathisi ezinobungozi eziza kukunceda ukuba ufike kwi-TOP yeenjini zophando ngexesha elifutshane.
I-backlink ephakamileyo ye-PR evela kwi-YouTube
. Ummandla wegunya lolawulo lommandla wale webwebhu ngu-10 kwabangama-10. Unokufumana i-backlink ephezulu ephezulu kulo mthombo, ulayishe ividiyo yakho apho. Yonke into oyifunayo kukudala ividiyo ecacileyo malunga neemveliso zakho okanye imboni ngokubanzi kwaye ulayishe le vidiyo kwiwebhu. Emva koko, kufuneka wenze inkcazo yevidiyo echaphazelekayo, kuquka i-URL yendawo yakho kuyo.
I-backlink ephakamileyo ye-PR evela kwi-Wikipedia
i-Wiki enye yeyona encyclopedia eninzi eyenziwa ngoncedo lwabavolontiya. Umthombo wewebhu ujongwa ngumlawuli kunye nokufaneleka kwawo. Yingakho inqanaba eliphezulu kwiGoogle ngemibuzo eyahlukeneyo yeGunya leMedia ye-Wikipedia iphinda ibe ngu-10 kwabangu-10. Ingumthombo opheleleyo wokunyaniseka nokugunyazwa kwanoma yiphina idibanse ukuba ingaba entsha okanye ixesha elide likhona. Zininzi iindlela zokufumana i-backlink ephezulu ye-PR ukusuka kulo mthombo obalulekileyo. Nangona kunjalo, xa kuziwa ekuqinisekisweni kweencwadi, izinto ziba nzima nakakhulu. Ngaphambi kokushicilela nayiphina iposi, abantu bangempela bajonga kwaye bayayivuma. Yingakho i-backlinks yakho ingasuswa ngexesha lokuqinisekisa ubungqina.
Nangona kunjalo, kukho ubuchule obuninzi obuya kukunceda ufumane i-backlink ezinamandla kwi-Wikipedia naluphi na umqobo:
Yakha ikhasi elitsha kwi-Wiki, ungashicileli nto kuyo. Kwexesha elithile eli phepha liza kubakho kwinqanaba eliyilwayo.
Emva koko ukhethe iphepha le-Wiki ngenye yemibuzo engathandwa kakhulu kwaye unamathisele indawo yakho yekhonkco kwikhonkco ngaphezulu. Akunakwenzeka ukuqinisekisa onke a maphepha, yingakho iivolontiya ze-Wikipedia ziphela nje ukungazihoyi imibuzo efundisayo engathandekiyo.
Ikhonkco yakho iya kubonakala kwiluhlu lwemithombo yolwazi.
Kufanelekile ukukhankanya ukuba i-Wikipedia backlinks ayikho-ilandela izixhumanisi. Yingakho iinqununu ezivela kulo mthombo aziyi kukuzisa. Nangona kunjalo, ukwandisa ukuthembeka kunye negunya lomthombo wakho wewebhu, kucetyiswa ukuba ufumane i-backlink kwiindawo eziphezulu ze-PR njenge-Wikipedia Source .